Via Einaudi 1, indlu panoramic e Barolo - I-Airbnb
Via Einaudi 1, indlu panoramic e Barolo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGiovanni
Sinikezela ngendlu yonke eBarolo, kwindlu yethu yosapho. Indlu ikufutshane kakhulu kumbindi welali, kwindawo ezolileyo kunye ne-panoramic.
Le ndlu ibandakanya ukuvulwa kwekhitshi kwigumbi lokuhlala elibanzi, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokulala elinamawele (iibhedi ezimbini zinokuguqulwa zibe yibhedi ephindwe kabini) kunye negumbi lokuhlambela elinye.
Ixabiso alibandakanyi irhafu yesixeko esiyi-1,50 € ngosuku ngomntu ngamnye, ngenxa yokufika.
Indlu yethu iye yahlaziywa ngokupheleleyo kule minyaka mibini idlulileyo kwaye ikhula kwimigangatho emithathu. Umgangatho ophakathi uhlala uhlala usapho lwethu, ongaphezulu ugcinelwe abakhenkethi kwaye unikwe indawo yokungena eyahlukileyo.
Eyona nto eyenza indlu yethu ibe yekhetheke kangaka yindawo yayo: nokuba yimizuzu emihlanu ukusuka embindini, ijonge eBarolo ukusuka phezulu, ibandakanya ilali kuzo zonke iinduli zayo. Iindwendwe zethu zingonwabela ipanorama ukusuka kwiibhalkhoni ezipholileyo zegumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala eliphindwe kabini, indawo egqibeleleyo apho isidlo sakusasa okanye isidlo sasemini ngeentsuku ezinelanga. Ifulethi litsha ngokupheleleyo, lilungiswe ngononophelo kwaye likhululekile. Iindwendwe zibonelelwa nge-wifi yasimahla, umatshini wokuhlamba, umatshini wokuhlamba izitya, i-oven yombane, i-oven microwave, imbiza yeti yombane, itoaster, isomisi seenwele, i-air-conditioning kumagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala, indawo yomlilo, kunye neeTV ezimbini zesathelayithi.
5.0 · Izimvo eziyi-158
Inombolo yomthetho: 00401300003
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barolo